हुने भयो अभिनेत्री काजल अग्रवालको बिबाह, को हुन् हुनेवाला श्रीमान् ?:: Naya Nepal
हुने भयो अभिनेत्री काजल अग्रवालको बिबाह, को हुन् हुनेवाला श्रीमान् ?
काठमाडौं । केही हिन्दी चलचित्रहरुमा समेत काम गरेकी दक्षिण भारतीय एक अभिनेत्रीको विवाह हुने भएको छ । टलिउडकी प्रसिद्ध अभिनेत्री काजल अग्रवालले चाँडै नै विवाह बन्धन बाँध्न लागेकी हुन् । यस कुराको बारेमा जानकारी अभिनेत्री आफैंले साझेदारी गरेका छन् ।
काजल अग्रवालले आफ्नो इन्स्टाग्राम पोष्टमा अक्टूबर महिनाको ३० तारिखमा गौतम किचलुसँग विवाह गर्न लागेको जानकारी दिएकी हुन् । यसका साथ, अभिनेत्रीले बताइन् कि उनको विवाहमा केवल परिवारका सदस्यहरू सम्मिलित हुनेछन् । अभिनेत्रीले विवाह पछि पनि आफ्नो काम जारी राख्ने बताएकी छिन् ।
काजल अग्रवालले आफ्नो विवाहको बारेमा जानकारी दिँदै लेखिन्, ‘यो कुरा साझा गर्न पाउँला म एकदमै खुसी छु । गौतम किचलुसँग म मुम्बईमा ३० अक्टूबर, २०२० मा विवाह गर्ने छु। , जसमा केवल परिवारका सदस्यहरू सम्मिलित हुनेछन् ।
यो महामारीले पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा गहिरो प्रकाश पार्छ, तर हामी सँगै आफ्नो जीवन शुरू गर्न तयार छौं र हामी जान्दछौं कि तपाईं पक्कै हामीलाई खुशी दिनुहुनेछ। म तपाईहरूलाई केहि दिनको लागि धन्यवाद दिन्छु कि तपाईले मलाई प्रेम र आशीर्वाद दिनुभयो र हामी नयाँ यात्रा सुरु गर्न जाँदैछौं, हामीलाई तपाईको प्रार्थना धेरै चाहिन्छ ।’
काजल अग्रवालले थप लेखिन्, ‘मैले अहिलेसम्म जे गरिरहेछु त्यही गर्न जारी राख्नेछु । मेरो दर्शकहरुको नयाँ आशा र नयाँ तरीकाले मनोरन्जन गर्दै तपाईको समर्थनका लागि धन्यबाद ।’
काजल अग्रवालले सन् २००४ को फिल्म क्यू हो गया नाबाट बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् । यस बाहेक उनी सिंघम, स्पेशल–२६, खेलानी नम्बर १५० मा पनि देखा परेकी थिइन् । बलिउड बाहेक काजल अग्रवालले तमिल र तेलगु फिल्महरूमा पनि ठूलो पहिचान बनाइसकेका छिन् ।
बलिउड अभिनेता अजय देवगनलाई ठुलो शोक
काठमाडौं । चर्चित बलिउड अभिनेता अजय देवगनलाई ठुलो शोक परेको छ । उनले ट्वीट गरेर जानकारी दिएका छन् कि उनका भाई अनिल देवगनको मृत्यु भएको छ । अजय देवगनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘हिजो रात मैले मेरो भाई अनिल देवगनलाई गुमाए । उसको मृत्युले हाम्रो परिवारलाई भत्कायो ।
एडीएफएफ र म दैनिक आफ्नो उपस्थिति सम्झना गर्नेछौं । महामारीको कारण, हामी कुनै पनि व्यक्तिगत प्रार्थना सभा आयोजना गरिरहेका छैनौं ।’ यस तरिकाले अजय देवगनले आफ्नो भाइको निधनको दुखद समाचार साझा गरेका हुन् ।
अजय देवगनका फ्यानहरू यस ट्वीटमा शोक व्यक्त गर्दै छन् र कठिन समयमा उनलाई ढाल बनेका छन् । एक प्रशंसकले लेखेका छन्, ‘भगवानले अनिल सरको आत्मलाई आराम दिऊन् । भगवानले तपाईलाई र तपाईको परिवारलाई यो शोक सहने बल दिऊन् । मेरो संवेदना तपाई संग छ ।
वीरु देवगनका बुबा र बलिउड स्टन्ट निर्देशकको गत वर्ष मृत्यु भयो । वीरू देवगनको मे २७, २०१९ मा मृत्यु भयो । आफ्नो बुबाको पहिलो वार्षिकोत्सवमा, अजय देवगनले पनि उनका लागि भावनात्मक पोष्ट लेखेका थिए ।